अध्ययन भन्छ – लक्षण नदेखिएका संक्रमितबाट कोरोनाभाइरसको फैलावट धेरै, नेपालमा परीक्षण गर्नै आनाकानी | Ratopati
नेपालको उल्टो चाल
आफै सम्पर्क गर्दा पनि कतार एयरवेजबाट आएका यात्रुको परीक्षण नै गरिएन (भिडियोसहित)
personरातोपाटी संवाददाता exploreकाठमाडौं access_timeचैत २३, २०७६ chat_bubble_outline1
काठमाडौँ । गत चैत ४ गते कतार एयरवेजमार्फत नेपालमा आएका यात्रुमा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएपछि सरकारले उक्त विमानमा आएका सबै यात्रुलाई खोज्ने कार्य तीव्र पारेको बताएको छ । सो जहाजबाट आउने सबैलाई क्वारेन्टाइनमा राख्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन पनि दिइसकेको भनिएको छ । स्थानीय तहसमेत उनीहरुको खोजीमा लागेको भनिएको छ । तर, ग्राउन्डमा रियालिटी भने सरकारको दाबीभन्दा फरक छ ।
महोत्तरी सुगा जलेश्वर वडा नम्बर–४ का हामिद राजा गत चैत ४ गते कतार एयरवेजको क्युआर ६५२ विमानबाट नेपाल आएका थिए । जब सोही विमानमा रहेकी एक युवती कोरोनाभाइरसबाट संक्रमित भएको समाचार बाहिर आयो, उनी आफैले टेकु अस्पताललाई सम्पर्क गरेर 'आफू पनि सोही विमानमा आएको र आफ्नो स्वास्थ्य परीक्षण गर्न आग्रह' गरे ।
तर अस्पतालले स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुको साटो घरमै बस्न सुझाव दियो । राजाले भने, ‘मैले टेकु अस्पतालमा सम्पर्क गर्दा 'तपाईंलाई कुनै लक्षण देखिएको छ ?' भनेर प्रश्न गरियो । श्वास लिनमा अप्ठ्यारो भइरहेको छ ? रुघा खोकी छ ? ज्वरो छ ? भनेर सोधियो । तर, तीमध्ये मलाई केही पनि थिएन । त्यसपछि उहाँहरुको सुझाव रह्यो कि होम क्वारेन्टाइनमै बस्नुस् ।’ जबसम्म कुनै लक्षण देखिदैन तबसम्म कुनै परिक्षण नगरिने टेकु अस्पतालले जवाफ दिएको उनले सुनाए ।
त्यसपछि समाजिक अभियान्ता सरोज रायलाई सम्पर्क गरेपछि मात्र उनको दबाबले जिल्ला तथा वडाहरुबाट सम्पर्क गर्न थालेको राजाले बताए । उनले भने, ‘जलेश्वर गएर ज्वरो जचाएँ, तापक्रम ९७ भन्दा तल नै थियो । तपाईंलाई कुनै समस्या छैन, समस्या भयो भने सम्पर्क गर्नुहोला भनेर पठाइदियो ।’
‘मलाई चित्त नै बुझेको थिएन । मैले पटक–पटक टेकु अस्पताललाई सम्पर्क गरे,’ उनले भने, ‘मेरो चाहना थियो कि कुनै लक्षण नदेखिए पनि एकपटक जाँच गरौँ । मेरो कारणले गाउँ समाजलाई कुनै असर नपरोस् । म आफूलाई ढुक्क पार्न चाहन्थे ।’
क्वारेन्टाइनमा १४ दिनसम्म बस्न भनिन्छ तर हमिद आएको शनिवार १९ दिन पुगेको छ । शनिवार उनी प्रदेश २ को प्रादेशिक अस्पतालमा पुनः स्वाब परीक्षणका लागि गए । तर उनको परीक्षण भएन । बरु, उनलाई आइसोलेसनमा बस्न भनियो । आफूलाई कुनै लक्षण नदेखिएकोमा ‘किन आइसोलेसनमा बस्ने ?’ भन्दै उनले परीक्षणका लागि आग्रह गरे । परीक्षणबाट आउने परिणाम अनुसार आफू अगाडि बढ्ने उनले अस्पताललाई भनेका थिए । उनले आफू घरमा पनि सुरक्षित तरिकाले नै बसिरहेको हुनाले आइसोलेसन भन्दा घरमै बस्ने र भोलि आएर परीक्षण गराउने भनि घर फर्केका थिए ।
उनी भन्छन्, ‘विदेशबाट आएपछि म आफैले चासो लिए । मैले आफै सबैतिर सम्पर्क गरे । मलाई कुनै समस्या छैन होला । तर, यदि भित्रैभित्रै म संक्रमित भएको भए, म आफैलाई खतरामा राख्थे नै अन्य व्यक्ति पनि जोखिममा हुन्थे ।’
हमिदले आफै मात्र होइन, आफ्नो भाइलाई पनि परीक्षणका लागि साथमा ल्याएका थिए । दबाबपछि उनीहरुलाई आइतबारका लागि समय दिइएको छ ।’ सोही एयरवेजबाट आएका अन्य एकजनाको पनि प्रादेशिक अस्पतालमा स्वाब परिक्षण भएको छ । तर रिपोर्ट आएको छैन ।
अझै पनि विज्ञहरु कोरोनाभाइरसबारे धेरै विषयहरुमा अनजान छन् । यद्यपि, यस भाइरसको संक्रमणको सुरुवाती केन्द्रविन्दु बनेको चीनलगायत विभिन्न देशहरुमा गरिएको अध्ययनले के देखाएको छ भने ३० देखि ५० प्रतिशत कोरोनाभाइरसका संक्रमितमा यसका लक्षणहरु नै देखिदैन । र, यसरी लक्षण नदेखिएका कोरोना संक्रमितहरु नै भाइरसको फैलावटमा बढी जिम्मेवार हुने गरेका छन् ।
त्यही भएर विश्व स्वास्थ्य संगठनले पटक–पटक जोड दिएर – ट्रेस एण्ड टेस्ट (कोरोनाभाइरस संक्रमितसँग सम्पर्कका आएकाहरुको पहिचान गर्ने र परीक्षण) गर्न भनेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले सकेसम्म धेरै परीक्षण गर्न पनि सुझाव दिएको छ । दक्षिण कोरिया र चीनले यही नीति अवलम्बन गर्दा त्यहाँ कोरानाभाइरसको संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन सुरुवाती सफलता हासिल भइरहेको छ ।
तर, नेपालमा भने संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरुको पहिचान गर्न कागजी पहलबाहेक केही पनि भइरहेको पाइएको छैन । संक्रमित भएका व्यक्तिसँग नजिक भएकाहरु आफै सम्पर्कमा आए पनि यहाँ लक्षण नदेखिएसम्म परीक्षण नै नगरिने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । लकडाउनलाई उपयोग गर्दै सरकारले परीक्षणको दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने हो । तर, सरकार यसमा नराम्ररी चुकिरहेको छ ।
April 5, 2020, 5:10 p.m. Ashok Acharya
Sohi din qatar qat aaune hamro gau ko ekjana Kathmandu baat vager aayako khabar payako chhu maile gau ko name iswarpur 14 sarlahi,harkathwa vanne thau ka raheka xa buwa ko name.dev narayan mahato ma so byakti ko name.anil mahato raheko xa waha lai kei samaya dekhi jaro aairahek tara pani gau tirr hidi raheko paiya ko xa sakinxa vane kripaya yo khabar nikaya samma puryaidinu paryo